ဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူဘေလီဇ် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဘေလီဇ်၏အလွန်သေးငယ်သောကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံအတွင်းရှိပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းတစ်ခု LLC တက်ချိန်ညှိခြင်းတရားစွဲမှုနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုအကြွေးဆန့်ကျင်နေတဲ့အင်အားကြီးလက်နက်ဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဘေလီဇ်အတွက် LLC ဥပဒေများများ၏ထိရောက်မှု၏အနံနှင့်နယ်ပယ်ဆှေးနှေးပါမညျ။ LLC ဥပဒေပြဌာန်း၏အနည်းငယ်အစုံလက်ရှိအချိန်တွင်ဘေလီဇ်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုကျော်ဖြတ်သို့မဟုတ်တူညီသောအခြားတိုင်းပြည်များတွင်ရှိပါတယ်။ ယင်း - ဤထူးခြားသောဥပဒေရေးရာ tool ကိုသို့ Hard-ရရှိခဲ့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနေရာယူခြင်း ဘေလီဇ် LLC, နှင့် ဘေလီဇ်ဘဏ်အကောင့် - များစွာသောအခြားတရားစီရင်မှုအတွက်လှူသောထက်သာလွန်ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးပေးနိုင်ပါသည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေကိုရှာအံ့သောငှါအဘယ်ကြောင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ် ဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူဘေလီဇ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဒီကြောက်မက်ဖွယ်တည်နေရာအတွက်ဖွင့်လှစ်။
ဘေလီဇ် LLC ဥပဒေ
Ironclad ။ ဤသည်ဘေလီဇ် LLC ဥပဒေများအကြောင်းပြောနေတာသည့်အခါစိတ်ကိုမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ဖြစ်စေရန်, 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုပိတ်ဆီးနေသောကြောင်းအဘယ်သူမျှမပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတူရိယာလည်းမရှိ။ သို့သော် 2011 ၏ဘေလီဇ်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများ (LLC) အက်ဥပဒေကိုအခြားတရားစီရင်မှုအလားတူဥပဒေများနှင့်ကင်းကသတ်မှတ်ထားကြောင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတစ်ကြောက်မက်ဖွယ်ဥပဒေပြဌာန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘေလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ LLC အက်ဥပဒေကိုအမေရိကန် LLC ဥပဒတွင်ပါရှိသောအချို့သောပြဋ္ဌာန်းချက်အပေါ်အခြေခံသော်လည်းတကယ်တော့နှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်၎င်း၏အမှုဥပဒသမိုင်းများကသရုပ်ပြအဖြစ်ကပိုထိရောက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပူဇော်ပြသထားသည်။
Related: ဘေလီဇ် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဘေလီဇ်အတွက်ကမ်းလွန် LLC တက်ချိန်ညှိခြင်းကြောင့်ပထမဦးဆုံးမျက်နှာမှာထင်ရစေခြင်းငှါသကဲ့သို့စိတ်ညစ်စရာသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးအတော်လေးလွယ်ကူပြီးသည်မဟုတ်။ ထိုအဘေလီဇ်တစ်တိုင်းပြည်ရုံမက္ကစီကိုကိုအောက်တွင်ထိုင်လျက်နှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေ, စိမ်းလန်းသစ်တောများနှင့်ကာရစ်ဘီယန်၏အပြာရေသည်အကြားအလတ်စားတစ်ခုကိုသိသိသာသာရိုးရှင်းသောစေပါဘူး။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ရန်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်နေသဘောထားအဘို့သင့်အစီအစဉ်များမှာစာမှနောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်ကိုသေချာစေရန်မသာဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း LLC ဥပဒေများတည်ထောင်ခဲ့သည်။
သင်တစ်ဦးဘေလီဇ် LLC သို့သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားမရထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အများအပြားအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ အောက်တွင်သည်ဤအကြောင်းပြချက်ခြောက်ဖြစ်ကြသည်။
အရေးကြီးမှတ်ချက်: ပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုခံစားရန်အလို့ငှာခုနှစ်, ဘေလီဇ် LLC တစ်ဦးဘေလီဇ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုအားဖြင့် 100% ပိုင်ဆိုင်ထားရမည်, သို့မဟုတ်အခြားအကာအကွယ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်နိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုကို။ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်တစ်ဦးရလဒ်များကို-oriented တရားသူကြီးတောင်မှဘေလီဇ် LLC ၏အတွင်းပိုင်းသည်မှန်လျှင်, ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်နိုင်ဘူး။ LLC သည်တစ်ဦးကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုကပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုပါကမည်သို့ပင်ဆို, သင်၏ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးအမိန့်မှဘာသာရပ်မဟုတ်သူနိုင်ငံခြားဂေါပက, သင်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးရန်အတွက်ခြေလှမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဘေလီဇ် LLC ဥပဒေ - Limited ဆေးတစ်လက်
အဆိုပါဘေလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ LLC အက်ဥပဒေတစ်ဦးဘေလီဇ် LLC ဆန့်ကျင်အသိအမှတ်ပြုသောသာဆေးတစ်လက်တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကအားသွင်းနိုင်ရန်တစ်ဦးမြီရှင်တို့သည်မြီစားတစ်ဦးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သည့်အတွက်တစ်ဦး LLC (သို့မဟုတ်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity) မှဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှု extract ပိုင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ တစ်ဦးမြီစားမျှပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်သို့မဟုတ်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ဆန့်ကျင်နေတဲ့အောင်မြင်သောဝတ်စုံကိုအခြေချရန်ကိုဆိုလိုပါသည်လျှင်တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်အတွက်မြီရှင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သောထိတ်သို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေများကဲ့သို့) အချို့သောအခြားဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ '' လိုက် '' ပိုင်ခွင့်ပေးသည် အရာအတွက်မြီစားတစ်ဦးရှယ်ယာရှိပါတယ်။
သို့သော်ဘေလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ LLC အက်ဥပဒေပြင်းထန်စွာတစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်၏အတိုင်းအတာကန့်သတ်။ ရှိလျှင် - အကြွေးရှင်သာပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါမြီစားဖို့သွားကြပြီမယ်လို့ဖြန့်ဝေရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တစ်ဦးကအားသွင်းနိုင်ရန်အတွက်မြီရှင်တို့သည်မြီစားအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရရှိထားသူဖြစ်သောတစ်ဦးဘေလီဇ် LLC တွင်ထည့်သွင်းအခြားပစ္စည်းများမှပေါ်ထွက်လာသောဝင်ငွေသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားကနေငွေပေးချေရှာညာဘက်ကိုမပေးပါဘူး။ တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး-မြီစားဆန့်ကျင်ပြဌာန်းပင်လျှင်, LLC အတွက်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ကြွေးရှင်ရဲ့လက်လှမ်းမမီကျော်လွန်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး LLC ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဘေလီဇ်တစ်ဦးယုံကြည်မှုတက်ချိန်ညှိခြင်းအကြီးအကျယ်ဘေလီဇ် LLC နှင့်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများ၏အားကြီးသောလက်ရုံးတော်အားဖြင့်စောင့်များနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်, ဝိန်း Fort Knox ၌သင်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖွင့်သော့ခတ်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံအကြွေးသည့်မြီစားတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရရှိထားသူရှိရာ LLC ဆန့်ကျင်တိုက်ရိုက်ကိစ္စတွင်ဆောင်ခဲ့ကမြီစားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပြီးသွားကြဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒါကမြီစားလိမ်လည်အဲဒါကို access ကိုရရှိမှုအနေဖြင့်ကြွေးရှင်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့တရားရုံးကနေဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွက် LLC မှပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းကြောင်းဟုဆိုကာနေဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ကြွေးရှင် LLC သည်အားဖြင့်ကျင်းပသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကွက်တိအဖွဲ့ဝင်-မြီစားဆန့်ကျင်တရားရုံးတွင်စီရင်အနိုင်ရထားပြီးသူတစ်ကြွေးရှင်တို့ကဖြန့်ဖြူးအဖြစ်ပူးတွဲနိုင်။ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်
(ကပျေါပေါကျသငျ့သညျ) ဤအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ရန်, ဘေလီဇ် LLC ဥပဒေများသည်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းစွာလိမ်လည်လွှဲပြောင်းသတ်မှတ်။ နဲ့စတင်ရန်, ကြွေးရှင် LLC သည်အဖွဲ့ဝင်-မြီစားသိလျက်နှင့်တကာဖို့ကြိုးစားမှုအတွက် LLC မှပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းကြောင်းသက်သေပြရမယ် အထူးသ သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏လိမ်လည်။ ဒီတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက် Proving incontrovertible သက်သေအထောက်အထားသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်တရားစီရင်ခြင်းကိုလုံခြုံစေရန်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်ဘယ်မှာပညတ်တရား၏တစ်ဦးဝင်းထဲမှာပါစေတစ်ဦးတည်း, သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်နီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ လိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်း၏ကန့်သတ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအားဖြင့်, ဘေလီဇ် LLC ဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီရန်ခက်ခဲကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတစ်ခုအဆင့်ကိုပေး။
ဒီတင်းကျပ်အနက်ဆဲလိမ်လည်လွှဲပြောင်းတာဝန်ခံဆန့်ကျင်နေတဲ့ဘေလီဇ် LLC ၌သင်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လုံလောက်သောမပါလျှင်မည်သို့ပင်သည်, ဘေလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ LLC အက်ဥပဒေပင်ဝေးကွာတတ်၏။ အဆိုပါဥပဒေများရှင်းလင်းစွာတစ်ခု LLC အတွက်မြို့တော်အကျိုးစီးပွားများအတွက်လဲလှယ်ရာ၌ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဆိုလွှဲပြောင်း LLC သည်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ထိုအချိန်ကသို့မဟုတ်ထို့နောက်မည်သည့်အနာဂတ်နေ့စွဲမှာလိမ်လည်လွှဲပြောင်းတာဝန်ခံမှကာကွယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီကိစ္စကို၏ရိုးရှင်းအမှန်တရားကဒီဖြစ်ပါသည်: လက်ရှိဘေလီဇ် LLC ဥပဒေများအောက်တွင်တစ်ဦးမြီရှင်တစ်ဦးလိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်းပြောဆိုချက်ကိုချောင်းကိုစေနိုင်သည်ကိုသုညအခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာရှိသေး၏။
အဆိုပါဘေလီဇ် LLC အက်ဥပဒေသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်အခြားလမ်းတစ်ဘေလီဇ် LLC ဆန့်ကျင်ယူဆောင်နိုင်တောင်းဆိုမှုများအပေါ်ကန့်သတ်တစ်ခုတင်းကျပ်ပညတ်တော်အတိုင်းပြုရန်တွန်းအားပေးဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ပင်ဘေလီဇ်တရားရုံးတွင်မည်သည့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတော်မူခြင်းကိုခံရဖို့အရေးဆိုမှုတစ်ခုကြွေးရှင် (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဖြစ်ပါတယ်ကိုမဆို) သည် LLC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏နေ့စွဲကနေပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်တစ်နှစ်သည့် နေ့မှစ. နှစ်နှစ်အတွင်းလိမ်လည်လွှဲပြောင်းပြောဆိုချက်ကို file ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအတင်းကျပ်ရက်စွဲများ၏အပြင်ဘက်တွင်တစ်ဦးဘေလီဇ် LLC ဆန့်ကျင်ယူဆောင်တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုစတင်ချိန် မှစ. ခြောဖြစ်ပါတယ်။ အထက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်စည်းမျဉ်းများစီးရီးအတူခေါ်ဆောင်သွား, န့်အသတ်များပညတ်တော်အတိုင်းတစ်ဘေလီဇ် LLC အတွက်လိုက်အောင်သို့မဟုတ်မတရားတောင်းဆိုချက်များဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အလွှာသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပေးစွမ်းသည်။
တစ်ဦးဘေလီဇ် LLC ဆန့်ကျင်နေတဲ့အရေးဆိုမှုကိုဘေလီဇ်တရားရုံးတွင်ကိုကြားရနိုင်မီ, အရေးဆိုသူပမာဏ၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်သူသို့မဟုတ်သူမထက် သာ. ကြီးမြတ်သောပမာဏကိုတစ်သိုက်ရှိပါတယ်သက်သေပြရမယ်ပြောဆိုထားသည်, ဒါမှမဟုတ် $ 50,000 - သာ. ကြီးမြတ်သည်ကိုမဆို။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေနမြေားတစ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကြွေးရှင်တားဆီးရန်ရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဒီရုံသဘောတူညီချက်အနိုင်အထက်ဖွစျလိမျ့မညျသောလိုအပ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ကြွေးရှင်ပြီးသားပိုပြီးသူမကသို့မဟုတ်သူမလိုက်ဘာ၏ထက်ဝက်ထက်ရှိပါတယ်လျှင်ပြီးနောက်အားလုံး, အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်အကုန်အကျနှင့်ရှည်ရှည်ခံဝန်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်တရားစွဲဆိုမှု mounting တန်ဖိုးရှိကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်စရိတ်, တကယ်ဖြစ်သနည်း
နှင့်မူပိုင်ခွင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း - - ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ရဲ့ဘေလီဇ် LLC ဥပဒေများတစ်ဦးဘေလီဇ် LLC တှငျကငျြးပခဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ရန်အဓိကအားရေးဆွဲကြသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအခြားရည်ရွယ်ချက်အားဝတျပွုနိုငျသညျ။ မျှော်လင့်, သူတို့ကပထမဦးဆုံးဌာန၌တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုတစ်ခုကိုဖြည့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အကြောင်းပြချက်ဆနျးစစျဖို့, ပိုမိုအရေးကြီးအချိန်မီနှင့်တစ်ခုလုံအမှုတင်ပြပေမယ့်ဖို့မတစ်ခုသာတောင်းဆိုသူကအတင်းအကျပ်။ တရားမျှတမှုကိုသို့မဟုတ်ဂုဏ်အသရေဘို့တစ်ဦးကရန်ပွဲကောင်းစွာအားလုံးအလေးသာဆန့်ကျင်လိုကျရှာရကျိုးနပ်စေခြင်းငှါ, သို့သော်ဤသေးငယ်သောကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများမျက်နှာပြောင်နည်းနည်းတခြားလောဘသို့မဟုတ်လက်စားချေခြင်းထက်အားဖြင့်လှုံ့ဆော်သောဘေလီဇ် LLC ဆန့်ကျင်ခေါ်ဆောင်သွားမည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။
ဘေလီဇ် LLC ချက်ခြင်းပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း
သင်တစ်ဦးဘေလီဇ် LLC ကို set up အခါသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုချက်ချင်းမဆိုလိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်းစွဲချက်မှကာကွယ်နေကြပါတယ်။ America မှာအခြားနိုင်ငံများသို့မဟုတ်ပြည်နယ်များတစ်ဦးမဖြစ်မနေကျေးဇူးတော်ကာလ (ဘယ်လိုအကျဉ်းမျှကိစ္စ) သို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုလွှဲပြောင်းဘို့တရားစွဲဆိုမှုယုံကြည်မှုကိုသို့မဟုတ် LLC ဆန့်ကျင်အစပျိုးစေခြင်းငှါလာသောအခါန့်အသတ်တစ်ခုအထိရှိသည်။ ဘေလီဇ် (အဖြစ်ဝေးသင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာရန်သူများကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်အဖြစ်အနည်းဆုံး) ဒီ 'အခွင့်အလမ်းပြတင်းပေါက်' 'ဖယ်ရှားပစ်နှင့်သင့် LLC ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်ထံမှချက်ချင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုရောက်လာပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ LLC အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတိုက်ခိုက်မှုမှပွင့်လင်းသည့်အခါမျှမအချိန်ကာလလည်းမရှိ။
အားလုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘေလီဇ် LLCs ဘေလီဇ်အတွက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူရေးသားထားသောဖွဲ့စည်းရေးလက်မှတ်နှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကမှတ်ပုံတင် file ရန်လိုအပ်သည်။ ပိုင်ရှင်တွေများ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ပြသကြသည်မဟုတ်။ အများပြည်သူတစ်ဦးကိုကျပန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသင်၏ဘေလီဇ် LLC အကြောင်းအသေးစိတ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်တောင်းလျှင်, သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုလျှို့ဝှက်ရှိနေပါဦးမည်။ ဘေးဖယ်အစိုးရပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကနေအပြင်ဘက်ပါတီများကသင်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသတင်းအချက်အလက်များရယူပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သငျသညျဘေလီဇ် LLC ဥပဒေများအောက်မှာပျော်မွေ့သောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အကျိုးအမြတ်များ စုစည်း. , ပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဟုတ်တယ်, နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ironclad စိတ်ထဲထံသို့မရောက်ရ။